मैलुङ खोलाको आईपीओ सूचिकरण कहिले ? कति होला ओपनिङ्ग रेञ्ज? - DURBAR TIMES
HomeShare Bazarमैलुङ खोलाको आईपीओ सूचिकरण कहिले ? कति होला ओपनिङ्ग रेञ्ज?
मैलुङ खोलाको आईपीओ सूचिकरण कहिले ? कति होला ओपनिङ्ग रेञ्ज?
साउन १४ गते पहिलो पल्ट आइपिओ निष्काशन गरेको मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको बाँडफाँड साउन २६ गते, मंगलबार सम्पन्न भएको थियो । यति खेर आइपिओ परेका लगानीकर्ता तथा नपरेका लगानीकर्ता आइपिओको नेप्सेमा सूचीकरण कुरेर बसेकाछन्आ तर आईपीओ बाँडफाँड भएकाे एक महिना बितीसक्दा पनि कम्पनीकाे आईपीओ नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत हुन सकेकाे छैन ।
कम्पनीको आईपीओ सूचिकरणका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जसँग सम्झाैता गर्ने प्रक्रिया सकिसकेको तर आवश्यक कागजातहरू नपुगेकाे हुनाले सूचिकरण भने हुन नसकेकाे जानकारी प्राप्त भएको छ । कम्पनीबाट सम्पूर्ण कागजातहरू आईसकेपछि अर्काे साताबाट दाेश्राे बजारमा काराेबार खुलाउने तयारी गरिएकाे नेप्सेले जनाएकाे छ ।
अन्तिम दिनसम्ममा कम्पनीको आईपीओमा २१ लाख १८ हजार ९२५ जनाले आवेदकले २ करोड ८४ लाख ४१ हजार ८ सय ४० कित्ताका लागि आवेदन दिएका थिए ।
गाेलाप्रथाबाट गरिएकाे बाँडफाँड सर्वसाधारणलाई छुट्याएको ६ लाख ८४ हजार ७ सय ४६ कित्ता सेयर ६८ हजार ४ सय ७४ जनाले समान १० कित्ताका दरले प्राप्त गरेका थिए । यस्तै, १० कित्ता भन्दा बढीका लागि आवेदन दिने आवेदकहरुमध्येबाट ६ जनाले ११ कित्ता सेयर प्राप्त गरेका थिए ।
कति होला ओपनिङ्ग रेञ्ज
नेप्सेले कम्पनीकाे पहिलो कारोबारका लागि प्रति सेयर न्युनतम ९५ रुपैयाँ ७५ पैसादेखि र अधिकतम २८७ रुपैयाँ २५ पैसासम्म ओपनिङ रेञ्ज (Open Price Range) निर्धारण गर्ने सम्भावना रहेकाे छ । नेप्सेले हरेक कम्पनीकाे पहिलो कारोबारको लागि नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज ताेक्ने गर्दछ ।
कम्पनीकाे आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिसेयर नेटवर्थ ९५ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ । साेही नेटवर्थकाे ३ गुणा २८७ रुपैयाँ २५ पैसा हुन्छ ।
मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम २०५९ साउन ७ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता भएर २०७१ भदौ ६ गते पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गर्दै आइरहेको कम्पनी हो ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा प्रतिसेयर नेटवर्थ १२० रुपैयाँ ७२ पैसा र प्रतिसेयर आम्दानी ९ रुपैयाँ ८५ पैसा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
Previous articleमनकामना स्मार्ट लघुवित्तको शेयरमूल्यमा सर्किट
Next articleसामलिङ्ग पावरको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन